Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment ‘कन्ट्याक्ट लेन्स’ प्रयोग गर्दा दृष्टि नै गुम्ने डर ! कारण जान्नुहोस - Pnpkhabar.com
‘कन्ट्याक्ट लेन्स’ प्रयोग गर्दा दृष्टि नै गुम्ने डर ! कारण जान्नुहोस
यदि तपाई कन्ट्याक्ट लेन्सलाई दोहोर्‍याएर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान रहनुहोस् । बेलायतमा कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग गर्ने मानिसमा यस्तो संक्रमण देखिएको छ जसले गर्दा मानिस दृष्टिविहिन पनि हुनसक्छ ।
‘एकान्थामोइवा केराइटिस’ नामको संक्रमणको कारण आखाँको कोर्नियामा पीडा र जलन हुन्छ । यो संक्रमण सूक्ष्मजीवका कारण फैलिन्छ ।
यसबाट पूर्णरुपमा संक्रमित हुने मानिसको दृष्टि क्षमतामा २५ प्रतिशत कम हुन्छ र उ पूर्णरुपमा दृष्टिविहिन पनि हुनसक्छ । यो बिमारीको उपचार सम्भव छ । यसबाट प्रभावित रहेका २५ प्रतिशत मानिसहरुले उपचारका लागि कोर्नियाको प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ ।
शोधको दौरान यस्तो संक्रमणमा वृद्धि भैरहेको देखिएको थियो । वैज्ञानिकका अनुसार कन्ट्याक्ट लेन्सको लागि प्रयोग हुने घोलको कारण लेन्स दूषित हुन्छ । यसबाट बच्नका लागि हात राम्ररी धोएर सुकाएपछि मात्र लेन्स छुनुपर्छ ।
आज क्वाँटी खाने दिन : यस्ता छन् क्वाँटीका फाइदा
यस्ता छन् मुला खानुका अचुक फाइदाहरु
यस्ता छन् शरीर बारे हामीलाई थाहाँ नभएको रोचक कुरा..
भिटामिन ‘डी’ कमि भएमा देखिन्छन् यस्ता लक्षण